Noise ColorFit Pro 2 Akwụkwọ ntuziaka onye ọrụ - Akwụkwọ ntuziaka +
Noise ColorFit Pro 2 ntuziaka onye ọrụ
Ihe siteshaju Nwere ike 3, 2021 Nwere ike 10, 2021
1 Comment na Noise ColorFit Pro 2 Ntuziaka ntuziaka
Home » Noise » Noise ColorFit Pro 2 ntuziaka onye ọrụ
1 Ajụjụ nke
2 Ihe nbudata faịlụ
4 Akwụkwọ ntuziaka ndị metụtara ya
o Gbanwee ihe kacha ọhụrụ na ColorFit Pro 2?
ColorFit Pro 2 nwere ihuenyo mmetụ zuru oke na ngosipụta buru ibu ma na-enwu gbaa, ọnọdụ egwuregwu dị iche iche na ogologo ndụ batrị ruo ụbọchị 10.
o o nwere ihe ngosi zuru ezu?
Ee, ColorFit Pro 2 nwere ngosipụta ihuenyo zuru oke.
o ColorFit Pro 2 mmiri na-egosi?
ColorFit Pro 2 nwere akara IP68. Ngwaọrụ ejiri ọkwa IP68 nke mba ụwa kwadoro kwenyere na ọ dabara adaba iji gbochie ájá, unyi na aja, ma na-eguzogide mmiri mikpuo mmiri ruo miri dị omimi nke 1.5m n'okpuru mmiri ruo nkeji iri atọ. Mara: ColorFit Pro 2 enwere ike iji ya saa ahụ. Agbanyeghị, zere sauna, mmiri ịsa ahụ na mmiri oke osimiri dị ka mmiri na mmiri nnu nwere ike imebi band ahụ.
Enwere ike iji ColorFit Pro 2 mee ihe mgbe igwu mmiri?
Mba, ịnweghị ike iji Noise ColorFit Pro 2 gị na-egwu mmiri. ColorFit Pro 2 bụ IP68 gosiri ma na-eguzogide ọgwụ naanị. Ngwaọrụ ejiri ọkwa IP68 nke mba ụwa kwadoro kwenyere na ọ dabara adaba iji gbochie ájá, unyi na aja, ma na-eguzogide mmiri mikpuo mmiri ruo omimi miri emi nke 1.5m mmiri n'okpuru mmiri ruo nkeji iri atọ.
o Kedu ihe igwefoto Mega Pixel nke ColorFit Pro 2 igwefoto?
ColorFit Pro 2 adịghị abịa na igwefoto.
o Enwere m ike iji ya see foto?
ColorFit Pro 2 adịghị igwefoto.
o Enwere m ike ịlele foto na smartwatch?
Mba, ColorFit Pro 2 enweghị gallery iji lee foto.
Ànyị nwere ike ịjụ oku sitere na smartwatch?
Ee, ị nwere ike ịjụ oku site na smartwatch.
o Ọ nwere ekwentị nsuso nhọrọ?
Eeh, ọ nwere nhọrọ nyocha ekwentị. Mepee App. Gaa na Ngwaọrụ. Họrọ Ọzọ. Tụgharịa na Chọta ekwentị m mma. Swipe aka ekpe na smartwatch homecreen gị. Họrọ Chọta m Ngwaọrụ nhọrọ.
o ColorFit Pro 2 nwere Ogbugbu Control?
Ee, ColorFit Pro 2 na-abịa na Wrist Sense nke na-agbanye na ngosipụta ahụ.
o ColorFit Pro 2 nwere ike ịchekwa ma kpọọ egwu?
ColorFit Pro 2 nwere igwe egwu dị egwu mana ọ nweghị ike ịchekwa egwu.
o nwere ike igwu egwu na ekweisi Bluetooth?
ColorFit Pro 2 enweghị ike ịkpọ egwu site na ekweisi Bluetooth.
o Ọ nwere atụmatụ ihu igwe oge niile?
Mba, ColorFit Pro 2 enweghị ihuenyo mgbe niile. Nwere ike tụgharịa elekere gị iji gbanye ihuenyo.
Can enwere ike ịgbanwe ihu nche?
Ee, ị nwere ike ịgbanwe ihu nche site na App. Mepee App. Gaa na Ngwaọrụ & Họrọ More. Gaa Setkpọ oku na Setịpụ nche ihu na Kwenye.
o Olee otu m ga-esi jiri elekere nkwụsị na ColorFit Pro 2 m?
Gbanwuo ihuenyo nke smartwatch, gaa na atụmatụ nkwụsịtụ. Pịa egwu ka ịmalite elekere nkwụsị. Pịa kwụsịtụ ịkwụsịtụ ya. Pịa bọtịnụ ogologo oge ka ịpụ na elekere nkwụsị.
o o nwere ihe mmetụta?
ColorFit Pro 2 na-abịa na a Obi Rate na osooso ihe mmetụta.
o ColorFit Pro 2 nwere GPS na WiFi?
Mba, ColorFit Pro 2 anaghị abịa GPS na WiFi. Agbanyeghị, ọ nwere ike soro ọnọdụ site na GPS ekwentị gị mgbe ejikọtara ya na ngwa Noise Fit SPORT.
o Kedu ihe ngwa ndị gụnyere ColorFit Pro 2?
ColorFit Pro 2 biara na ntuziaka onye ọrụ na eriri USB na-akwụ ụgwọ.
o Olee otu m ga esi edobe ihe eji eme ihe eji eme ColorFit Pro 2?
You nwere ike ịgbaso njikọ ahụ iji melite ColorFit Pro 2 gị.
o Gini mere na my ColorFit Pro 2 agaghị emekọrịta?
Nke a nwere ike ịbụ n'ihi nkwụsị njikọta na ngwaọrụ.
o Kedu ihe kpatara na enweghị m ike ịwụnye ngwaọrụ ColorFit Pro 2 m?
Malitegharịa ekwentị gị ColorFit Pro 2 site na ekwentị gị iji melite ya.
Why Gini mere na igwe ColorFit Pro 2 m adighi nma?
Nke a nwere ike ịbụ n'ihi nkwụsị na njikọta n'etiti ColorFit Pro 2 na Noise Fit SPORT App. Biko lelee anya ma ọ bụrụ na eriri ahụ na elekere ahụ dị na ntanetị Bluetooth yana agbanyela mkpu na App.
o Olee otu m si malitegharia ColorFit Pro 2 m?
Long pịa bọtịnụ dị na ColorFit Pro 2 ka ịmalitegharịa smartwatch
o Kedu ihe batrị nwere ma kwụrụ na oge?
ColorFit Pro 2 na-abịa na ikike batrị nke 210mAh nke na-enyefe ruo ụbọchị 10 nke ndụ batrị na ụbọchị 45 nke njikere.
Olee otu m ga-esi chajịa ngwaọrụ ColorFit Pro 2 m?
Soro njikọ ebe a
o Olee otu m ga esi esi mara mgbe ejiri ihe cha cha?
Jụọ ngwaọrụ gị ihe dị ka awa 2, ọ ga-egosipụta 100% ebubo na ịnweta ebubo zuru ezu.
o Kedu ka m ga esi elele batrị na ngwaọrụ m ColorFit Pro 2?
Nwere ike ịlele ọkwa batrị na ColorFit Pro 2 na Noise Fit Sport APP. Mepee App ma gaa na Ngwaọrụ peeji nke.
Enwere m ike ịgbatị ndụ batrị ColorFit Pro 2 ngwaọrụ batrị m?
Nwere ike ịgbatị ndụ batrị na ngwaọrụ gị site na ịgbanye ọkwa nchapụta, site na ịgbanyụ njirimara Wrist Sense na ịgbanye Nchọpụta Ọgụgụ Obi site na Akpaaka na Akwụkwọ ntuziaka.
o Olee otu ColorFit Pro 2 ngwaọrụ gakọrịta ha data?
ColorFit Pro 2 na-ejikọ data na njikọ Bluetooth na Noise Fit App.
o Kedu aha ngwa?
Aha nke ngwa a bụ Noise Fit App.
Kedụ ka m ga-esi jikwaa profaịlụ Noise Fit m?
Nwere ike ijikwa Noise Fit profaịlụ site na ngwa ahụ. Mepee App. Gaa Onye ọrụ. Họrọ Ozi Onwe gị ma zụọ data ahụ.
o Kedu ka m ga-esi gbanwee ma ọ bụ tọgharịa okwuntughe Noise Fit Sport m?
Can nwere ike ịtọgharịa Noise Fit paswọọdụ na ngwa ahụ. Mepee App. Gaa Onye ọrụ. Họrọ Ntọala sistemụ. Họrọ Akaụntụ Management. Na-ahọrọ mgbanwe paswọọdụ ma gbanwee ya.
o Kedu ka m ga-esi gbanwee asụsụ m na ColorFit Pro 2?
Nwere ike ịgbanwe asụsụ dị na Noise Fit App. Mepee App. Gaa na Ngwaọrụ ma họrọ More họrọ Ngwaọrụ asụsụ ma họrọ ndabere site OS.
o Kedụ ka m ga-esi jikọtara ndị enyi na ColorFit Pro 2?
You nweghị ike ijikọ ndị enyi na ColorFit Pro 2.
Kedụ ka m ga-esi kekọrịta data nnabata m Noise?
Mepee Noise Fit App. Chọọ maka akara ngosi, họrọ usoro ị chọrọ ịkekọrịta.
Olee otu m ga-esi jiri Noise Fit App m mee mgbatị ahụ?
Mepee App na-aga Homepage.
Olee otu m ga-esi gbanwee igwe ihe m no na ColorFit Pro 2?
Nwere ike ịgbanwe otu mmesho gị Noise Fit App. Mepee App. Gaa Onye ọrụ. Họrọ Ntọala sistemụ. Họrọ Mwube ntọala wee gosi.
Mata & Notma Ọkwa
o Ọ na-egosi ọkwa sitere na ngwa mmekọrịta ịkparịta ụka n'socialntanet?
Eeh, ColorFit Pro 2 na-egosi nnweta nkwupụta maka ngwa mmekọrịta mmekọrịta mmekọrịta ejirila Noise Fit Sport App mee.
o Gini mere na anaghị enweta ColorFit Pro 2 nzi ozi sitere na ekwentị m?
nwere ike ịhụ ozi na ozi ọkpụkpọ sitere na ekwentị na nche?
Ee, ị nwere ike ịhụ ozi na ozi na-akpọ oku mgbe ị nwetara ozi ma kpọọ oku ma ọ bụrụhaala na agbakọtara otu egwu na Noise Fit Sport App.
o Kedụ ka anyị ga - esi hu ozi gbasara ọkpọ oku?
Gbanwee ozi oku na Noise Fit SPORT ngwa iji hụ ozi oku na-abata.
o Enwere m ike ịgụ ozi na-abata na ColorFit Pro 2 m ma ọ bụ ka m ga - enweta amamọkwa ozi?
A ga-amara gị ọkwa maka ozi ndị ahụ na ColorFit Pro 2 ozugbo ejirila egwu ahụ na ngwa Noise Fit SPORT na ekwentị gị. Can nwere ike ịgụ ozi ahụ na oge ngosi. Rịba ama: A gaghị echekwa ozi ozugbo ị gụrụ.
o kedụ ka m ga-esi eji eji ColorFit Pro 2 ngwa a egwu m oge nsọ m?
Nwere ike ịgbaso njikọ iji mara otu esi eji ColorFit Pro 2 ngwa iji soro usoro oge ịhụ nsọ.
Ànyị nwere ike ịgbachi oku mbata?
A ga-amara gị ọkwa maka oku a na ColorFit Pro 2 smartwatch ozugbo etinyere band ahụ na ngwa Noise Fit SPORT na ama gị. Ebe ọ bụ na mmachi ahụ nọ n'ọnọdụ ngosi ngosi, ọ dịghị mkpa ịgbachi oku na-abata.
o Kedu ka ColorFit Pro 2 si gosi na calorie ole m gbara ọkụ?
ColorFit Pro 2 na-eme ka ọnụ ọgụgụ calorie dị ọkụ dabere na oge ọrụ gị, usoro e mere na ebe dị anya.
o Kedu ka m ga esi esi jiri ColorFit Pro 2 soro akara obi m?
ColorFit Pro 2 nwere ike ịchọpụta ụda obi ma aka ma ọ bụ na-akpaghị aka. Nwere ike soro obi obi gị na Noise Fit App.
o Gini mere na ahughi m obi obula na ColorFit Pro 2 m?
Nwere ike ịhụ ọnụọgụ obi na ColorFit Pro 2 smartwatch ọ bụrụhaala na ị na-eyi ya na nkwojiaka gị ma enweghị ohere n'etiti elekere na nkwojiaka. Maka nyocha zuru ezu, ị nwere ike ịlele ngwa Noise Fit.
o Ihe elekere a na - emekorita ụra ma ọ bụrụ na ngwa ejikọtaghị?
Ee, ColorFit Pro 2 ga-atụ ụra gị ma ọ bụrụ na ejikọtaghị band ahụ na App. The data ga-synced ngwa ozugbo ejikọrọ.
o O nwere Pedometa?
Ee, ColorFit Pro 2 na-abịa na pedometa wuru n'ime.
o ColorFit Pro 2 dakọtara na iPhone?
ColorFit Pro 2 dakọtara na iPhones niile na-agba ọsọ na iOS 9 na karịa.
o ColorFit Pro 2 dakọtara na gam akporo?
ColorFit Pro 2 dakọtara na ekwentị gam akporo niile na-agba ọsọ na ụdị Android 4.4 na n'elu.
What Ọ bụrụ na eriri emebiela ebe m nwere ike ịzụta eriri dochie?
Ee, ị nwere ike ịzụta eriri eriri. Nwere ike itinye iwu gị maka eriri ColorFit Pro 2 site na webụsaịtị gọọmentị, www.gonoise.com.
Olee otu m ga-esi gbanye eriri afọ aka na ngwaọrụ m ColorFit Pro 2?
Wepu eriri site na pịa ma jiri ngwaọrụ dochie eriri ahụ.
Noise Colorfit Pro 2 SmartWatch Ntuziaka ntuziaka NoisE COLORFIT PRO 2 SMARTWATCH USER MANUAL NOISE Download na ...
Corsair H150i PRO Low Noise 360mm RGB Liquid CPU oyi Onye Ntuziaka Corsair H150i PRO Low Noise 360mm RGB Liquid CPU oyi ...
Corsair H100i PRO Low Noise 240mm RGB Liquid CPU oyi Onye Ntuziaka Corsair H100i PRO Low Noise 240mm RGB Liquid CPU oyi ...
Corsair H115i PRO RGB Low Noise 280mm Liquid CPU Cooler User Manual Corsair H115i PRO RGB Low Noise 280mm Liquid CPU oyi ...
MEE ọdịyo M6 PRO Universal-Fit Noise-Isolating Musician's In-Ear Monitors User Manual MEE igwe okwu M6 PRO Universal-Fit Noise-Isolating Musician's In-Ear Monitors User ...
MEE ọdịyo M6 PRO Universal-Fit Noise-Isolating Musician's In-Ear Monitors M6PROBT User Manual MEE ọdịyo M6 PRO Universal-Fit Noise-Isolating Musician's In-Ear Monitors M6PROBT ...
Ihe siteshaju Nwere ike 3, 2021 Nwere ike 10, 2021 Ihe naNoiseTags: AgbaFit Pro 2, Noise
QAZQA Raga CL Ntuziaka ntuziaka Black
Pooja Gupta ekwu, sị:
July 14, 2021 na 5: 25 pm
Daalụ maka ozi gị ọ na - enyere m aka ịghọta ọtụtụ ihe dị m mkpa
RAVE Water Trampoline Owner Manual
Ntuziaka nke Earbuds Ikuku nke EPOS
FEIT Electric Mgbanwe N'okpuru Kabinet 192 Mezie Light Ntuziaka
RAVE Iwu Anchor Connector Kit Ntuziaka
SAMSUNG Front Control Slide-in Electric Range Smart Dial Air Fry User Manual
Pooja Gupta on Noise ColorFit Pro 2 ntuziaka onye ọrụ
John Horan on Hisense RF208N6CSE French Door Refrigerator ntuziaka ntuziaka
Swiiti Duncan on Anker Soundcore Life P2 Ntuziaka ntuziaka
Pooja Gupta on Mi Smart Band 5 Ntuziaka ntuziaka
admin on MPOW M5 BH231A Bluetooth Headset User Manual